Tenerife မှာဘာလုပ်ရမလဲ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, Tenerife
သိခြင်းကော Tenerife ဒီနေ့လား ကနေဒါကျွန်း (၇) ခုတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်ဖြစ်သည် ခရီးသွား ဦး တည်ရာ သငျသညျသဘာဝသဘောကျနှစ်သက်လျှင်, ကတစ်နှစ်ပတ်လုံး visitors ည့်သည်များလက်ခံရရှိသည်။
သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်ယနေ့ဖြစ်သည် Tenerife မှာဘာလုပ်ရမလဲ.
2 Tenerife မှာဘာကြည့်ရမလည်း
Tenerife ပြောခဲ့သလိုပဲ ၎င်းသည်ကျွန်းကြီးများနှင့်ကျွန်းများတွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်တည်ငြိမ်သောနေထိုင်သူသန်းတစ်ရာနီးပါးရှိသော်လည်းစပိန်နိုင်ငံတွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား dest ည့်သည်များစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်မှာနှစ်စဉ်သန်းနှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာ လေဆိပ်နှစ်ခု, တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်နှင့်မြို့တော် Santa Cruz de Tenerife ၏မြို့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏နက်နဲသောပင်လယ်များမှပေါ်ထွက်လာပြီးမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုမှပုံသွင်းခဲ့သည့်ကျွန်းသုံးကျွန်း၏လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကဤကျွန်းသည်ပေါင်းစည်းခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ က) ဟုတ်တယ်၊ ရှုခင်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့သည်မြင့်မားသောတောင်မှ (စပိန်နိုင်ငံရှိအမြင့်ဆုံးတောင်၊ ဒီရှိ Teide တောင်တန်း) မှနေ၍ ရွှေရောင်တောက်ပနေသောစိတ်ကူးယဉ်ကမ်းခြေများအထိ။
ပထမ ဦး စွာမြို့တော်။ မြို့ကြီးများသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောတံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ Santa Cruz ၎င်းသည် Tenerife ၏အရှေ့ဘက်အစွန်ဆုံးနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ရှေးအကျဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရပ်မှသင်္ဘောများစွာသည်အမေရိကသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ၁၉ ရာစုတွင်အလွန်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်ကြီးမားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဆိပ်ကမ်းသည်စူးစမ်းလေ့လာရေးသမားများသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများမဟုတ်တော့ဘဲကာရစ်ဘီယန်သို့ထွက်ခွာလာသည်။
သင်လှိုင်းတံပိုးကိုကြိုက်လျှင် ဘတ်စ်ကားများ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သင်မြို့တော်ပတ်လည်သင်တို့ကိုယူသောတယူနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အပေါ်နှင့်အောက်စတိုင်လ်ဖြစ်ပြီးမြို့၏အထင်ကရနေရာများစွာကိုသိခွင့်ပြုသည်။ ပရိသတ်၊ ပါလီမန်၊ တက္ကသိုလ်၊ လာဂူနာ၊ Plaza de España, Plaza de la Candelaria ။ သင်အချိန်နှင့်အတူမသွားလျှင်သို့မဟုတ်သင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောအရာကိုပြန်မသွားခင်ကြည့်ရှုလိုလျှင်လည်ပတ်ပါ။
၎င်းသည်မြို့တော်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကသင်ကမ်းခြေသို့မပြေးနိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Las Teresitas သဲသောင်ပြင်စွန်ပလွံပင်များနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောရေနှင့်အတူတစ်ကီလိုမီတာရှည်သောရွှေသဲသောင်ပြင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လှပသောကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Tenerife ၏မြောက်ဘက်။ ၎င်းသည်မြို့တော်အပြင်ဖက်ရှိဆန်အန်ဒရက်စ်ကျေးရွာတွင်တည်ရှိသည့် Anaga တောင်တန်းများကြားတွင်ရှိသည်။ သင်လူများကိုမကြိုက်ပါကတနင်္ဂနွေနေ့သို့မသွားပါနှင့်၊ ရက်အနည်းငယ်သာသွားပါက၊ ကာရစ်ဘီယံစတိုင်ကမ်းခြေ.
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ပွဲတော် ဖေဖော်ဝါရီမှမတ်လအတွင်းမြို့သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ရှင်သန်လာသည်။ အသွင်ပြောင်းထားသောလူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ တစ်ညလုံးချီတက်ပွဲများနှင့်ကပွဲများရှိသည်။ ပါတီကလူ.
Santa Cruz ပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ် Masca။ ၎င်းသည်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် Teno တောင်တန်း၏အနောက်မြောက်ဘက်။ အဲဒါက သာယာတဲ့ရွာ ၎င်းကိုရောက်ရှိရန်ခက်ခဲနိုင်သော်လည်းကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါသည်။ နက်ရှိုင်းသောချိုင့်ဝှမ်းများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောအပင်များ၊ ဒါပြောလို့ရပြီ မှော်အရပျ။ ရွာကနေသုံးနာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးသင်မက်စကာပင်လယ်အော်ကိုရောက်သွားတယ်၊ ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှသင့်အတွက်ခက်ခဲသောခက်ခဲသောခက်ခဲသောပြန်လှည့်ရန်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည် အဆိုပါ Giants။ အမျိုးမျိုးသောအရောင်အမျိုးမျိုးသောချောက်ကမ်းပါးများ၊ ,ရာမများ၊ နွေးထွေးသောရေများ၊ လွှမ်းမိုးသောမိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ပင်လယ်နီပေါ်တွင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များရှိသောမြို့တစ်မြို့ရှိသည်။ ချောမော? ဟုတ်ပါတယ်။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် Tenerife တွင်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်မင်းရောက်လို့လား မီးရထားတှဲ သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုငှားရမ်းပါ စက်ဘီးစီးခြင်း။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထင်းရှူးသစ်တောများမှလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကင်မနိုဒီစန်တီယာဂို၊ ပင်လယ်နှင့်တောင်များအကြားပေါင်းစည်းခြင်း၊ စပျစ်ဥယျာဉ်များ၊ ပျားရည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပန်းပွင့်၊ ပြတိုက်များနှင့်သမိုင်းဝင်လမ်းကြောင်းများ။
Touring Tenerife ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် ရှုထောင့်များစွာ Archipenque, Ayosa, Baracán, Chivisaya, Cruz de Hilda, El Boquerón, Cumbres del Norte ရှုထောငျ့၊ Cruz del Carmen ရှုထောငျ့။
Tenerife မှာဘယ်ကမ်းခြေတွေကိုငါတို့အကြံပြုသလဲ။ ကောင်းပြီ၏ကမ်းခြေရှိပါတယ် ရွှေသဲ နှင့်လည်း၏ အနက်ရောင်သဲ။ Puerto de la Cruz တွင်လူသိများသော Playa Chica နှင့် Punta Brava ပါသော Playa Jardín Complex ရှိပြီးဥယျာဉ်များဝိုင်းရံထားသည်။ တိတ်ဆိတ်သောကမ်းခြေသည်အယ်လ်ဘမ်ကမ်းခြေဖြစ်ပြီးဟိုတယ်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ အေးဆေးသောရေ၊ ရွှေရောင်သဲများ၊ ကမ်းပါးဘေးတွင်ပုံသဏ္andာန်နှင့်ပုံသဏ္andာန်နှင့်နေ ၀ င်ချိန်တွင်သင်၏မျက်လုံးကိုဆုံးရှုံးရန်အကောင်းဆုံးနေရာ။
အခြားကမ်းခြေများမှာ Ajabo သဲသောင်ပြင်အနက်ရောင်သဲ၏ Alcaláသဲသောင်ပြင်, Almáciga၏ Antequera သဲသောင်ပြင်လျှို့ဝှက်ပြီးခြေလျင်သွားရန်ခက်ခဲသည် Arenisc သဲသောင်ပြင်သို့မဟုတ်ကျွန်းတောင်ပိုင်းရှိအယ်ဘိုဘိုကမ်းခြေ၊ အယ်လ်ကင်မွန်သဲသောင်ပြင်, ချစ်စရာကောင်းနှင့်တောင်ပိုင်း Playa de အယ်လ်Médano, အ အယ်လ် Socorro သဲသောင်ပြင်အနက်ရောင်နှင့်ကျောက်စရစ်များ၊ La Jaquita၊ La Pinta (သို့) La Nea တို့အတွက်အကျယ်အ ၀ န်း ၂၅ မီတာနှင့်အရှည် ၂၁၀ မီတာရှိသည်။
ကမ်းခြေများစွာလည်းအများကြီးရှိသည်။ ကျွန်းအားလုံးသည်သင်မည်သည့်ကျွန်းသို့ပြောင်းရွှေ့သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုလည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Tenerife ၏သဘောသဘာဝကို ဆက်လက်၍ သင်မစွန့်ခွာနိုင်ပါ Teide အမျိုးသားဥယျာဉ်, ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ ဒါဟာဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မီးတောင်ငါတို့အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ရှုခင်း၊ \_ t စပိန်နိုင်ငံတွင် ၃၇၁၈ မီတာအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်s ။ ဂူများ၊ ဥမင်များ၊ ကုန်းဒါရာနှင့် Tedie-Pico Viejo stratovolcano တို့သည်ကမ္ဘာတွင်ထူးခြားသည်။
ပန်းခြံရှိတယ် 19 ထောင်ဟက်တာကြီးမား Puerto de la Cruz မှလည်းကောင်း၊ Costa Adeje မှသော်လည်းကောင်းကားဖြင့်သွားလာနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကားဖြင့်သွားလျှင်ပန်းခြံတစ်ခုလုံးကိုသွားနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းတစ်လမ်းကိုတက်။ နောက်တစ်ခုကိုဆင်းသွားခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ The Teide မြစ်များသည် ၁၇ မီတာအချင်း caldera ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် Teide ၏ထိပ် ယင်း၏ ၃၇၁၈ မီတာသည်ထူးကဲလှသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအမြင့်ဆုံးမီးတောင်ဖြစ်သည်။
သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ကေဘယ်လ်ကားကိုသုံးပါအမြင့် ၂,၃၅၆ မီတာရှိဘူတာရုံနှင့် ၃၅၅၅ မီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားရှစ်မိနစ်ခန့်ကြာပြီး၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပျံသန်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Terminal မှနေ၍ သင် crater ထဲတွင်သင်ထွက်ခွာမည့်လမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိနစ် ၄၀ ခန့်လမ်းလျှောက်ရပြီးမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်ကျွန်းများနှင့်ပင်လယ်ရှုခင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ထိုက်တန်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာကြိုတင်ပြီးအထူးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ သင်ကမပေးနိုင်ပေမယ့်ရက်စွဲတစ်ခုသင်သတ်မှတ်ရမယ်။
ပန်းခြံတွင်လမ်းကြောင်းကွန်ယက်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်သောလမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဤနေ့စွဲများမှအပနေ့တိုင်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၅ နှင့်ဇန်နဝါရီ ၁ နှင့် ၆ ရက်။ လမ်းကြောင်းများလမ်းကြောင်းနှင့်အခက်အခဲကွဲပြားမှုကြောင့်သင်၏စွမ်းရည်များကိုသင်သတိပြုရမည်။
သငျသညျလုပျနိုငျနောက်ထပ်အရာဖြစ်ပါသည် IAC သို့သွားရောက်ပါ (Instituto Astrofísico de Canarias)။ Volcano Life ကုမ္ပဏီသည်လမ်းညွှန်ခရီးစဉ်များကိုဘာသာစကားများစွာဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အွန်လိုင်းသည် ဒါ့အပြင်ပန်းခြံအတွင်းဖြစ်ပါတယ် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တော်။
သငျသညျအခြို့သောသမိုင်းကိုထည့်သွင်းလိုလျှင်သင်သည်တတ်နိုင် အမျိုးမျိုးသောကျေးရွာများနှင့်မြို့များ၏သမိုင်းဝင်စင်တာများကိုသိရန် ကျွန်းမှ: Garachico ၏သမိုင်းဝင်စင်တာ၊ Buenavista del Norte, Arona, Guía de Isora, Güimarသို့မဟုတ် Icod de los Vinos ၏သမိုင်းဝင်စင်တာ, နှင့်ကျွန်ုပ်သည်လမ်းမှားသို့ရောက်နေပြီ။ အကြောင်းမှာကျေးလက်နှင့်မြို့များစွာသည်ချစ်စရာကောင်းသောသမိုင်းဝင်နှလုံးသားများဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင် ပြတိုက်ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း, Tenerife အရာအားလုံးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။